ဖုန်း Contacts များကို Zaw Gyi to Unicode ပြောင်းနည်း – Myanmar Unicode® Migration
ဖုန်း Contacts များကို Zaw Gyi to Unicode ပြောင်းနည်း
မြန်မာစာပါပြီးသား (မြန်မာယူနီကုဒ်စနစ်) ဖုန်းတစ်လုံးကို ပြောင်းလဲသုံးစွဲသူ တစ်ယောက်အနေဖြင့် ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတစ်ခုကတော့ အရင်ဖုန်းအဟောင်းက ဖုန်းခေါ်တဲ့ လူနာမည် လိပ်စာတွေ ကို ဖုန်းအသစ်ထဲ ပြောင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါ ဖတ်ရှုလို့မရတဲ့ အနေအထား မျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ( ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ရေးထားတဲ့ စာသားကို ယူနီကုဒ်ဖောင့်ဖြင့် ဖတ်မရတဲ့ အခက်အခဲပါ)
ဒီတော့ ဇော်ဂျီဖောင့် ကနေ ယူနီကုဒ် format ဖြစ်အောင် ပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်။ အစအဆုံး ပြန်ပြင်ရိုက်နေရရင်တော့ များရင်များသလောက် ကြာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လွယ်ကူ မြန်ဆန်မယ့် နည်းတစ်ခုကို ဖေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်။
1. ဂူးဂဲ contact သုံးဖို့ အင်တာနက် ရှိရပါမယ်။
2. ဇော်ဂျီ မှ ယူနီကုဒ်ပြောင်းဖို့ converter လိုပါတယ်။
3. .vcf ဖိုင် (မိမိဖုန်းထဲက လိပ်စာ အဆက်အသွယ်တွေကို Export ထုတ်ထားပါ။ ဖိုင်နာမည်က .vcf နဲ့ဆုံးပါတယ်။ ဥပမာ- my_Contacts.vcf ဆိုပါတော့)
(၁) Browser ကိုဖွင့်ပြီး https://www.google.com/contacts/u/0/?cplus=0#contacts သို့ဝင်လိုက်ပါ။
(၂) ဘယ်ဖက် menu မှ Import Contacts… ကိုရွေးနှိပ်လိုက်ပါ။
(၃) pop-up ပေါ်လာမည်။ [Choose File] button နှိပ်ပြီး my_Contacts.vcf ဖိုင်ကိုရွေးပေးပါ။ ပြီးလျင် Import ကိုဆက်နှိပ်လျင် မိမိ၏ အဆက်အသွယ် လိပ်စာများ Google ထဲသို့ဝင်ရောက်သွားပါလိပ်မည်။
(၄) မိမိပြောင်းလဲလိုသော အဆက်အသွယ် များကို check box တွင် အမှန်ချက်ပေး၍ ရွေးချယ်ပေးပါ။ အစဉ်အတိုင်းရှိသော အဆက်အသွယ်များကို Shift key ဖြင့်တွဲ နှိပ်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးလျင်-
(၅) အပေါ်ဖက်မှ More drop down menu ကိုနှိပ်ချပါပြီး Export… ကိုနှိပ်ပါက pop-up တစ်ခုပေါ်လာပါမည်။
Which export format? ၏အောက်ဆုံးမှ (o) vCard format (for importing.. စသည်) Option ကိုရွေး၍ Export နှိပ်လိုက်ပါ။ contact.vcf file ဖြင့် download ကျလာပါမည်။
မှတ်ချက်။ ။ မူလ my_Contacts.vcf ဖိုင်နှင့် google က export လုပ်လိုက်တဲ့ contact.vcf ဖိုင် ၂ခု ဘာကွာလဲဆိုတော့ my_Contacts.vcf ဖိုင်က မြန်မာစာသားတွေကို တိုက်ရိုက်မဖော်ပြဘဲ code format နဲ့ပဲပြတယ်။ contacts.vcf ဖိုင်ကတော့ မြန်မာလို တန်းပြီးပြပေးတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာလို ပြပေးတဲ့ vcf အမျိုးအစားကို အရင် ပြောင်းယူရတာပါ။ ပြောင်းလဲခြင်း အဆင့်က အခုမှ စတာပါ။ ကဲ ဆက်သွားကြရအောင်.
(၆) contacts.vcf ဖိုင်ကို Text Editor ဖြင့် ဖွင့်ပြီး စာသားအားလုံးကို Select All > Copy ယူထားပါ။
(၇) http://www.mcf.org.mm/myanmar-unicode-converter/ ကို Browser မှဝင်လိုက်ပါ။
(၈) contacts.vcf ဖိုင်မှ Copy ကို On Line Converter တွင် Paste ချကာ [Convert to Unicode format] နှိပ်လိုက်ပါက Unicode စနစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကို Copy ယူထားလိုက်ပါ။
(၉) contacts.vcf ဖိုင်မှ မူလစာသားအားလုံးကို ဖျက်ပစ်ပြီး ခုနက Convert လုပ်ပြီးသားကို Copy ယူထားတာကို Paste ချပြီး ဖိုင်ကို Save ပေးခြင်းဖြင့် ယူနီကုဒ် စနစ် contacts.vcf ဖိုင်ကိုရရှိပါမည်။
(၁၀) ၎င်းဖိုင်ကို မိမိ ဖုန်းအသစ်တွင် ပြန်သွင်းပေးလို့ရပါပြီ။
အလုပ်နဲနဲ ရှုပ်ပေမယ့် လွယ်ကူပါတယ်။ ယူနီကုဒ် စနစ်ဖြင့် အဆင်ပြေကြပါစေ။